Imithetho eliqela ekufuneka ilandelwe kuyilo lweplastikhi yokwenza umngundo - iAojie Mold Co., Ltd.
Auto Izahlulo Ikubumbe
Imveliso yeZimboni zomngundo
Iimveliso zasekhaya zomngundo
Isithuthuthu kunye ne-Scooter Mold
Indawo yokusebenzela kunye nezixhobo
Inkqubo yokuPhuma koMngundo
Itshathi yokuHlola yokuHlola yokuHlola
Imithetho eliqela ekufuneka ilandelwe kuyilo lweplastikhi yokwenza umngundo
Ngokuphuculwa okuqhubekayo kwishishini lokuvelisa laseTshayina, uphuhliso lweshishini lunemisebenzi engaphezulu nangaphezulu kwimveliso zeplastiki. Kukho imigaqo engqongqo kubukhulu, imigaqo kunye nokunyamezelwa kweemveliso. Uyilo lweplastikhi yokwenza umngundo kukufumana imveliso yokubumba yeplastiki. Njengenxalenye ebalulekileyo esemgangathweni, abayili kufuneka ngobunono ukuyila ubungakanani kunye nokubalulwa nokuvunda, kananjalo baqwalasele iingxaki ezinokubakho kuyilo kunye nenkqubo yokuvelisa, kwaye ziqwalasele ngokubanzi inkqubo yoyilo, ukuze kuphuculwe izinga lokuphumelela koyilo .
Ke ngoko, ukuphuculwa kwenqanaba loyilo lokungunda kubaluleke kakhulu kuphuhliso lweshishini lokuvelisa ngeplastiki. Njengomyili weplastikhi wokuyila, kuyimfuneko ukuphononongwa ngokukuko iikhonsepthi zoyilo kunye neendlela, uhlalutye ngononophelo iingxaki zoyilo ohlangane nazo, fumana izisombululo zokuphepha iingxaki. Ukuphindwaphindwa, ukuthatha amanyathelo asebenzayo ukuphucula ukusebenza kunye nobunzululwazi bokuyilwa kwesikhunta, emva koko ukusombulula ingxaki, ukuphucula ukusebenza koyilo, ukuphucula ukuthembeka kweemveliso zeplastiki, ukuphucula izibonelelo zoqoqosho zeemveliso.
Amalungu anokuchaneka okuphezulu kobukhulu kunye nemilo, abayili kufuneka bayile ngononophelo kwaye bahlangabezane neemfuno ezichanekileyo. Ixesha loyilo kunye nokusetyenziswa kwamandla zihlala zingaphantsi kwe-p42.5; ubukhulu bebonke bufana. Umyinge wezinto zekhonkrithi kufuneka ube sengqiqweni, kwaye elona nani lilungileyo linokuphucula ngokufanelekileyo ukunganyibiliki kwekhonkrithi. Ukuqhekeka okuhlala kubonwa kwizakhiwo zekhonkrithi zezi: ukuqhekeka kweqondo lobushushu, ukuqhekeka kwe-shrinkage, ukuqhekeka kokuhlala, ukuqhekeka kwe-shrinkage njalo njalo. Iqondo lobushushu liphezulu kakhulu ehlotyeni. Xa uqinisa ikhonkrithi, tshiza amanzi ngexesha ukuqinisekisa ukuba umphezulu ugcinwa ufumile.
Ezona ngxaki ziphambili ekuhlangatyezwane nazo kwinkqubo yeplastikhi yokuyila ukungunda azonelanga ukwenza ukuba abayili baphambuke kuyilo oluqhelekileyo. Kwinkqubo yoyilo lokungunda, abayili bokungunda abanayo imigaqo engqongqo yenkqubo kunye nemigaqo ecacileyo yoyilo lokungunda kunye nokuvelisa. Ke ngoko, inqanaba loyilo lwabayili abathile alilinganiswa ngomgangatho omanyeneyo. Ngokusetyenziswa ngakumbi nangakumbi kweemveliso zeplastiki, iimfuno ezichanekileyo zeemveliso zeplastiki ezisetyenziswa kwizihlandlo ezahlukeneyo nazo zahlukile.
Imbuyekezo Aojie Mold Co., Ltd.